Ihe kacha mma Black Friday na-emekọ na Rossellimac | Esi m mac
Rossellimac, ọ bụ a Reseller adịgboroja Apple nke di Almería, Castellón, Ceuta, Córdoba, Huelva, Granada Alhóndiga, Granada Serrallo, Jaén na Madrid. Ma olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, ha abanyela na Black Friday afọ a 2015. daysbọchị ha ga - enwe ya ike bụ ụbọchị Nọvemba 27 na 28Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta ụfọdụ azụmahịa dị egwu ha na-enye, echekwala banyere ya. O dakọtara na onyinye ha na-enye maka ịbụ nwata akwukwo ma obu onye nkuzi kedu ihe si 2%.
Mac niile nwere ego nke € 100, MacBook, MacBook Ikuku, MacBook Pro, na ị nwere ike nweta ya 899 €,. Na iMac 21 ″, iMac 21 ″ 4K na iMac 27 ″ 5K, ha na-ego € 100, na ị nwere ike nweta ya maka 1.179 €. E wezụga nke ahụ iPad Ikuku na iPad Ikuku 2 nwere ego nke 40 €, na maka naanị 349 € Nwere ike ịbụ nke gị. Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ iPhone, iPhone 6 128GB nke nwere onu ahia 899 €, Ugbu a maka 769 Nwere ike ịbụ nke gị. N'ikpeazụ, ngwa dịka ikpe maka iPad ma ọ bụ iPhone, akpa azụ maka Mac gị, nwee 10% ego na Rossellimac. Nke a bụ onyonyo na-ekwu na eserese bara uru otu puku kwuru.
Ọ bụrụ n ’anwaa anwa, ha ga - emekwa ka ọ dịrị gị mfe karịa n’ ihi, n’ihi ị nwere ike ịkwado nzụta gị n'ụzọ atọ na-enweghị mmasị. Ha na-ebuga n'ụlọ dịka ngwaahịa a, jụọ ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu onyinye nke Apple ụwa na nke a Black Friday 2015, pịa na-esote njikọ. Iji lelee onyinye ndị ahụ n'ụzọ zuru ezu, yana otu esi akpọtụrụ ha, anyị hapụrụ gị njikọ Rossellimac n'okpuru usoro ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple kacha mma Black Friday na-emekọ na Rossellimac
N'ihi na Swift na-ewere nnweta maka mmemme